Atletico Nacional oo soo jeedisay in Koobkii ay ku tartami lahayd la siiyo kooxdii diyaaraddu la bur burtay ee Chapecoense – Gool FM
Sawirkii ugu dambeeyey ee laga qaaday kooxda kubadda cagta Chapecoense ka hor inta aysan u duulin dalka Colombia, halkaasoo ay ku bur burtay diyaaraddii ay la socdeen.
(Medellin) 29 Nof 2016 – Kooxda Atletico Nacional oo ay lugta hore ee ciyaarta kama dambeysta ah ee COPA SUDAMERICANA 2016 ku ballansanaayeen kooxda Chapecoense oo dhammaantood ku geeriyooday diyaaraddii ku dhacday Waddanka Colombia ayaa soo jeedisay ficil samafal ah oo aad u heer sarreeya.
Atletico oo iyadu ka dhisan halka diyaaraddu ku soo dhacday ee Medellin ayaa waxay dhambaal ay u direen xiriirka kubadda Cagta Colombia ‘CONMEBOL’, kaasoo ay kaga codsadeen in Koobkaasi la guddoonsiiyo kooxda Chapecoense si loogu sharfo qoysaskii iyo taageerayaashii waayay xiddigahoodii.
Ciyaaryahan Gilberto Garcia oo ka tirsan Atletico Nacional ayaa hoggaaminayay codsigan guusha lagu abaal-marinayay kooxdii ka soo horjeedday, waxaana uu yiri: “Waxaan doonaynaa in kooxda Chapecoense loo doorto Horyaalka Sudamericana 2016”.
FIFA "Waa maalin murugo leh waxaana u Tacsiyeynaynaa qoysaska ciyaartoydii ku dhimatay shilkaas"